War deg deg ah:Dhulgariir xoog leh oo caawa ruxay Hargeysa, Boorame & deegaano kale – SBC
War deg deg ah:Dhulgariir xoog leh oo caawa ruxay Hargeysa, Boorame & deegaano kale
Magaalooyinka Hargeysa, Boorame & deegaano kale oo ka mid ah maamulka la magac baxay Somaliland ayaa caawa waxaa ruxay dhulgariir xoogan oo si weyn looga dareemay magaalooyinkaasi.
Dhulgariirka ayaa ku dhuftey magaalada Hargeysa & Boorame caawa abaara 2:30 saqda dhexe waqtiga Geeska Afrika waxaana la soo sheegayaa in dadku ay si weyn uga argagaxeen.
Dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorame oo xiligii dhulgariirku dhacayey badankoodu jiifay ayaa waxay ka warhaleen dhulka oo ruxmay, waxaana cabsi dadku uga baxeen guryaha iyagoo banaanada & barxadaha isugu tagey.
Kaahin Maxamuud ayaa u sheegay SBC in dhulgariirkan caawa ka dhacay magaalada Boorame uu ahaa mid aad uga xoogan kii ku dhacay magaaladaasi sanadihii sideetameeyadii.
Ma jirto ilaa iyo hada wax khasaare ah oo la soo sheegay oo la xiriira dhulgariirka caawa ka dhacay magaalada Boorame, sidoo kale dhulgariir aan sidaasi u xoog badneyn ayaa isaguna ka dhacay deegaano ka tirsan degmada Gabiley.
Dhinaca kale magaalada Hargeysa waxaa la soo sheegayaa in dhulgariirka caawa ka dhacay uu ahaa mid aad uga xoogan kii sanadkii 1980kii ka dhacay magaaladaasi, iyadoo aan la soo sheegin ilaa iyo hada wax khasaare ah oo uu dhaliyey dhulgariirkaasi.